Tsaratanana: mpaka an-keriny ireo mpiasan’ny Kraoma maty voatifitry ny zandary | NewsMada
Tsaratanana: mpaka an-keriny ireo mpiasan’ny Kraoma maty voatifitry ny zandary
Maty tsy tra-drano ity mpanao “kidnapping” tratran’ny zandary tany Tsaratanàna. Namaly izy io ary nitsoaka ka voatery nitifitra ny mpitandro filaminana…
Lehilahy iray anisan’ny mpaka an-keriny ireo mpiasan’ny kraoma tany Tsaratanàna no voasambotry ny zandary tany Manongaha, Sarobaratra, Tsaratanàna. Voalazan’ny zandary fa anisan’ireo atidoha nikotrika resaka fakana an-keriny ity tratra ity. Teny an-dalana nitondra azy io anefa no nitsoaka tampoka izy io, ka nampijanona ny zandary, saingy nanohy ny lalany ihany izy io. Voatery nitifitra ny zandary ka voa izy, aty nitarika ny fahafatesany izany.
Fantatra fa mbola misy karohina hatrany manodidina ity fakana an-keriny tany Tsaratanàna ity. Efa any am-ponja ny olona maro voasambotra tamin’izy ity, izay niandahy niambavy mihitsy. Nisy ny tafaporitsaka ka anisan’izany ity tratra farany kanefa izao nanohitra ny zandary izao, ary maty voatifitra.
Mitohy hatrany ny fanadihadiana ataon’ny zandary manodidina ny raharaha fakana an-keriny. Efa nilamindamina ny any Tsaratanàna tato ho ato.
Andrasan’ny maro koa ny fiafaran’ny fakana an-keriny karana eto amintsika. Efa nisy ihany ny tratra faramparany teo tany Toamasina, saingy tsy mbola mazava amin’ny rehetra ny momba ireo mpaka an-keriny ireo karana maro teto an-dRenivohitra. Misy ifandraisany amin’ireo tany Toamasina ireo teto Antananarivo? Nangingina tampoka ny momba ireo polisy sy miaramila tratra tany Toamasina ireo. Voatonontonona matetika ny mpitandro filaminana amin’ny asa ratsy. Ity farany teny Antanimena ity, asa hoe nahoana loatra.